जनकपुरमा भट्टराईलाई प्रवेश निषेध - Radio Tribeni FM
जनकपुरमा भट्टराईलाई प्रवेश निषेध
शैलेन्द्र महतो,जनकपुर, असोज ७ – एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई मधेस आन्दोलनमा समर्थन जनाउन शुक्रबार जनकपुर आउने कार्यक्रम तय भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
संविधान जारी भईसकेको अवस्थामा आन्दोलन चलिरहेको बेला समर्थन जनाउन आउने भनेपछि आन्दोलन बिथोल्न सक्ने भन्दै मोर्चाले उहाँलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । संवाद तथा सहमति समितिको सभापति भएर संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै डा. भट्टराई प्रति अब मधेसी जनताले विश्वास गर्ने आधार गुमाएको मोर्चाको ठहर छ ।
मधेसमा दिन प्रतिदिन प्रहरीेले गोली हानी मधेसीको हत्या गर्दा पनि चुप लागेका डा. भट्टराई पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीको मधेसमा गुम्न लागेको आधारलाई बचाउन मधेस आन्दोलनमा समर्थन गर्ने नाटक गर्न लागेको मोर्चाको जनाएको छ । संविधान बहुमतबाट पास भईसकेपछि मात्र मधेसी र थारुको अधिकारको विषयमा मुख खोलेकाले उहाँप्रति शंकाको दृष्टिले हेरिन थालिएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन् ।
मधेसी जनतसँग पटकपटक घात गरेको एवं वेकुफ बनाएको भन्दै अब पत्याउने आधार नभएकाले डा. भट्टराईलाई जनकपुर प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय लिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा धनुषाका प्रवक्ता संजय सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भट्टराई जनकपुर आए विमान स्थलमै कालो झण्डा देखाउने तथा रोक लागाउने निर्णय भएको हो ।